မျက်ကြည်လွှာ နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ် အပိုင်း မ‌ရွေး လှူပါမည် ဆိုတဲ့ ကျဆုံး သွားတဲ့ သူရဲကောင်းမလေး မဇင်မာအောင် – Cele Lover
မျက်ကြည်လွှာ နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ် အပိုင်း မ‌ရွေး လှူပါမည် ဆိုတဲ့ ကျဆုံး သွားတဲ့ သူရဲကောင်းမလေး မဇင်မာအောင်
မြင်းခြံတွင် လူငယ်အမျိုးသမီး တစ်ဦး ကျဆုံးပြီး နှစ်ဦး ဒဏ်ရာရ မြင်းခြံ မြို့တွင် ဆန္ဒပြလူထုအား စစ်ကောင်စီလ က်န က် ကို င်တပ်များက ယနေ့ မတ် ၂၈ ၌ အကြ မ်း ဖ က် ပ စ် ခ တ်ခဲ့ရာ အမျိုး သမီး တစ်ဦး ကျဆုံးကာ နှစ်ဦး ဒ ဏ် ရာရခဲ့သည်။.. ကျဆုံးသူသည် အသက် ၂၄ နှစ်ရှိ မဇင်မာအောင် ဖြစ်ပြီး ညာ ဘ က် ရ င် ဘ တ် အောက် ကျ ည် ထိ မှ န်ကာ နေရာတင်ကျဆုံးခဲ့သည်။မြင်းခြံမြို့ တွင် ယနေ့ ညနေ ၃ နာရီအချိန်ထိ ပ စ် ခ တ် နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများ ထံမှ သိရသည်။.
ယမန်နေ့ တွင် မြင်းခြံ၌ ကျဆုံးသူ ၅ ဦး ရှိပြီး ဒ ဏ် ရာရသူ ၁၁ ဦး ရှိခဲ့ကာ ကျဆုံးသူများ မှာ အမှတ် ၂ ရပ်ကွက်မှ အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ် ဦးစောနှင့် အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ် ဦးသောင်းနိုင်ဦး၊ အမှတ် ၁ ရပ်ကွက်မှ အသက် ၄၀ အရွယ် ဦးမျိုးနိုင်၊ ရှားတောကျေးရွာမှ..အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် မောင်ဟိန်းဝင်းထွန်း၊ ဂျုပ်ပင်ကျေးရွာမှ အသက် ၂၀ အရွယ် ကိုထွန်းရင် တို့ ဖြစ် သည်။စစ်ကောင်စီ လ က် ကို င်များ၏ ပ စ် ခ တ် မှုကြောင့် မတ် ၃ မှ ယနေ့ မတ် ၂၈ အထိ မြင်းခြံတွင် စုစုပေါင်း ကျဆုံးသူ ၁၅ ဦး ရှိပြီ ဖြစ်သည်။.. အမည် – ဇင်မာအောင် (ခ)ဇင်ပု အသက် -24 သွေးအမျိုးအစား – A ကျွန်မအကယ်၍ အကြောင်းတစ်စုံ တစ်ရာကြောင့်.. အသက် ကျဆုံးခဲ့သည်ရှိသော်.. အသုံးဝင် နိုင်သေးတဲ့…
ကျွန်မရဲ့ မျက် ကြည် လွှာ နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် … အစိတ်အပိုင်း မ‌ရွေး ကျွန်မလှူပါမည်.. ဆေးရုံအထိ သွားပြီး စာရွက်စာတန်း နဲ့မလုပ်ရသေး.. သော်လည်း ကျမ ကာယကံရှင် ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်.. ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ လှူပြီး ခွင့်ပြုပါတယ်။.. အခုလိုအချိန် ပေးပြီး ဖတ်ရှု အားပေး ခဲ့ကြတဲ့ ပရိတ်သတ် ကြီး အားလုံး ဘေးအန္တရာယ် များ ကင်းဝေးကြပြီး မြန်မာ ကြီးလဲ အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းပါစေ လို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်း ပေး လိုက် ရ ပါတယ်။
မ်က္ၾကည္လႊာ နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္ အပိုင္း မ‌ေရြး လႉပါမည္ ဆိုတဲ့ က်ဆုံး သြားတဲ့ သူရဲေကာင္းမေလး မဇင္မာေအာင္
ျမင္းၿခံတြင္ လူငယ္အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး က်ဆုံးၿပီး ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရ ျမင္းၿခံ ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပလူထုအား စစ္ေကာင္စီလ က္န က္ ကို င္တပ္မ်ားက ယေန႔ မတ္ ၂၈ ၌ အၾက မ္း ဖ က္ ပ စ္ ခ တ္ခဲ့ရာ အမ်ိဳး သမီး တစ္ဦး က်ဆုံးကာ ႏွစ္ဦး ဒ ဏ္ ရာရခဲ့သည္။.. က်ဆုံးသူသည္ အသက္ ၂၄ ႏွစ္ရွိ မဇင္မာေအာင္ ျဖစ္ၿပီး ညာ ဘ က္ ရ င္ ဘ တ္ ေအာက္ က် ည္ ထိ မွ န္ကာ ေနရာတင္က်ဆုံးခဲ့သည္။ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ တြင္ ယေန႔ ညေန ၃ နာရီအခ်ိန္ထိ ပ စ္ ခ တ္ ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ထံမွ သိရသည္။.
ယမန္ေန႔ တြင္ ျမင္းၿခံ၌ က်ဆုံးသူ ၅ ဦး ရွိၿပီး ဒ ဏ္ ရာရသူ ၁၁ ဦး ရွိခဲ့ကာ က်ဆုံးသူမ်ား မွာ အမွတ္ ၂ ရပ္ကြက္မွ အသက္ ၄၈ ႏွစ္အရြယ္ ဦးေစာႏွင့္ အသက္ ၄၆ ႏွစ္အရြယ္ ဦးေသာင္းနိုင္ဦး၊ အမွတ္ ၁ ရပ္ကြက္မွ အသက္ ၄၀ အရြယ္ ဦးမ်ိဳးနိုင္၊ ရွားေတာေက်းရြာမွ..အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္ဟိန္းဝင္းထြန္း၊ ဂ်ဳပ္ပင္ေက်းရြာမွ အသက္ ၂၀ အရြယ္ ကိုထြန္းရင္ တို႔ ျဖစ္ သည္။စစ္ေကာင္စီ လ က္ ကို င္မ်ား၏ ပ စ္ ခ တ္ မႈေၾကာင့္ မတ္ ၃ မွ ယေန႔ မတ္ ၂၈ အထိ ျမင္းၿခံတြင္ စုစုေပါင္း က်ဆုံးသူ ၁၅ ဦး ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။.. အမည္ – ဇင္မာေအာင္ (ခ)ဇင္ပု အသက္ -24 ေသြးအမ်ိဳးအစား – A ကၽြန္မအကယ္၍ အေၾကာင္းတစ္စုံ တစ္ရာေၾကာင့္.. အသက္ က်ဆုံးခဲ့သည္ရွိေသာ္.. အသုံးဝင္ နိုင္ေသးတဲ့…
ကၽြန္မရဲ့ မ်က္ ၾကည္ လႊာ နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ … အစိတ္အပိုင္း မ‌ေရြး ကၽြန္မလႉပါမည္.. ေဆး႐ုံအထိ သြားၿပီး စာရြက္စာတန္း နဲ႔မလုပ္ရေသး.. ေသာ္လည္း က်မ ကာယကံရွင္ ျဖစ္သူကိုယ္တိုင္.. ေက်ေက်နပ္နပ္နဲ႔ လႉၿပီး ခြင့္ျပဳပါတယ္။.. အခုလိုအခ်ိန္ ေပးၿပီး ဖတ္ရႈ အားေပး ခဲ့ၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္ ႀကီး အားလုံး ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ား ကင္းေဝးၾကၿပီး ျမန္မာ ႀကီးလဲ အျမန္ဆုံး ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ လို႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္း ေပး လိုက္ ရ ပါတယ္။
Previous Article ညီအစ်ကိုအရင်းလို ချစ်ခင်ရတဲ့ ညီလေးတစ်ယောက် လူထုလှုပ်ရှားမှု မှာ ကြွေလွင့်သွားခဲ့ အတွက် စိတ်ထိခိုက်နေတဲ့ G Fatt
Next Article အဆင်မပြေခက်ခဲနေကြသူတွေ အ များကြီးရှိနေတာကြောင့် တတ်နိုင်သ လောက်လို အပ်တာတွေလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ တိုင်ရွန်